Umphezulu wolwandle eTayabas Bay Grand Oceanview DOME - I-Airbnb
Umphezulu wolwandle eTayabas Bay Grand Oceanview DOME
Agdangan, Calabarzon, Philippines
Ungquphantsi sinombuki zindwendwe onguChere Madeleine
UChere Madeleine yi-Superhost
Wamkelekile kweyokuqala iBeachTop Geodesic DOME kwiiPhilippines!
Le dome imangalisayo ye-glamping yeyona ndawo yokubalekela kubathandi bangaphandle. Le ndawo intle yolwandle iphezulu ivumela umbono omangalisayo wolwandle ukutshona kwelanga kanye kumgangatho wakho wabucala.
Idome eyodwa inebhedi etofotofo yobukhulu bokumkani, i-rustic daybed kunye neshawari yangaphandle eyenza ube mnye nendalo.
Qhagamshelana kwakhona nendalo kolu hambo lungenakulibaleka lokubaleka.
Enkosi ngomdla wakho wokubhukisha nathi.
Ixesha lakho lokungena ngu-2PM kwaye ixesha lokuphuma li-12PM
Ifestile yokungena isuka ku-2PM ukuya ku-6PM. Sinabagcini kuphela nceda uqiniseke ukuba ungenile phambi ko-6PM.
Asikuvumeli ukungena kwangethuba okanye uphume kade kwezi ntsuku kuba ukuphuma nokuphuma kwezindlu zangasese kufuneka kugqitywe.
Amasuntswana nje ambalwa anokuthi abe luncedo:
1. Ufika njani apho:
IWaze kunye ne-GMaps: iBeachTop eTayabas Bay
Idilesi: Sitio Punturan, Kanluran Calutan, Agdangan, kwiPhondo laseQuezon
2. Amanqaku oQhagamshelwano:
Uya kuba neenombolo zethu ngqo kwiinkcukacha zakho zokubhukisha. Nceda uqaphele ukuba uqhagamshelo lwe-intanethi ngamanye amaxesha lukhohlisa kwi-BeachTop, kwaye i-AirBnB isenokungabi yeyona ndawo ilungileyo yokufikelela kuthi.
Abakhathaleli bethu ngu-Edward kunye neNceba kwaye unokufikelela kuKa Ligaya nawe. Siza kunika iinkcukacha zoqhagamshelwano ngokwahlukeneyo.
3. Amanqaku ekufuneka eqatshelwe:
Indawo yethu kukubaleka ngokugqibeleleyo kubomi besixeko.
Indawo onokuthi uphumle kuyo, uphumle, uhlaziye kwaye wonwabele imbonakalo yolwandle, ukutshona kwelanga kwaye ukuba unethamsanqa uyakubona iMt. Banahaw evela kwiBeachTop ⛰
I-DOME iphangalele kwaye inekhaya. Ixhotyiswe ngeyunithi yokupholisa umoya ukuze kungabikho miba ngexesha leentsuku ezishushu.
Yanga ngaphandle. Ngemini yeHlobo enelanga, kungcono ukuphumla phantsi kwemithi apho kukho impepho entle.
• Ukuba ngokuhlwa kubanda, nceda ucele umlilo webhonfire (ubuncinane bentlawulo) ukukufudumeza kwaye wenze nees'mores nazo!
• Akukho zitawuli nezinto zangasese zikhoyo.
• Ukuba uthe waphula okanye ulahlekelwa yimpahla yethu, iimpahla, njl.
• Nceda uqaphele ukuba iDOME ayibobungqina besandi. Ziqaphele ezinye iindwendwe kwaye uyeke ukuba ngxola ukusuka ngo-9PM kude kuse. Ukuba usebenzisa izithuba eziqhelekileyo, nceda ugcine engqondweni ubumfihlo babanye kwaye ucinge ngesimilo sakho.
• Ngokungqongqo UNGATSHAYI ngaphakathi kwidome nceda 🚭
• Ukutya kunokuziswa nangona sinezinambuzane ezininzi ezisingqongileyo ngoko ke nceda uyiqaphele le nto. Baseyinxenye yendalo esiyonwabelayo.
• Sinezigrisi ezifumaneka simahla. Amalahle ayafumaneka nakwivenkile yethu yakwaSari-sari.
• Kukho iintsuku/ubusuku apho iingcongconi zizulazula. Sibonelela ngeezappers zeengcongconi kunye nezityalo ze-citronella ezijikeleze i-DOME ukwenzela ukuba ube lula.
• Nceda ulahle inkunkuma, ii-wrappers, iinkonkxa, iibhotile, izitompi zecuba njl.njl. kwaye uchithe ngokufanelekileyo. Sicebisa ngamandla ukuba uzise eyakho inkunkuma ekhaya njengoko le ndawo ingenayo indlela ephucukileyo yokulahla inkunkuma.
5. Ukutya Kwangaphakathi:
• Sinokutya (lutong bahay) okufumanekayo okuza kuphekwa ngabakhathaleli bethu kwaye iimenyu zinokufumaneka kwiifoto zethu.
• Ukuba unomdla, qiniseka ukuba ufake iiodolo zakho kwiiyure ezingama-24-48 ngaphambi kokuba ungene njengoko abakhathaleli bethu kuya kufuneka bathenge izithako njengoko kufuneka. Naluphi na uhambo oluya esixekweni luya kusixabisa, ngoko nceda usazise kwangaphambili.
• Kukho ivenkile yesari-sari ekufutshane apho unokuthenga khona izinto eziyimfuneko ezisisiseko njengesepha, intlama yamazinyo, iisoda, iibhiya, imidiza, iitshiphusi, njl.njl. kwaye unokuodola ngokuthe ngqo kumgcini wethu uEdward kwaye kufuneka akwazi ukuzisa kuwe. !
• Abasebenzi bethu basebenza nzima ukukugcina ukhululekile kwaye bathatha umhlala-phantsi ngo-6PM kuba kufuneka baphinde bavuke kwangethuba ukuze benze isidlo sakusasa njengoko kufuneka.
6. Kucelwa uze nesazisi esisebenzayo kunye nekhadi lesitofu ukuze zingqinwe.
• Kwakhona, nceda uze nezinto zakho zokucoca, iimaski zobuso, kunye nezikhuselo zobuso njengenxalenye yemigaqo ye-COVID-19.
7. Indawo elungele izilwanyana:
• Siyindawo eLumkelekileyo kwi-PET! Kuphela izinja okanye iikati ezivumelekileyo. Akukho silwanyana sinokuziswa kwipropati.
• Izilwanyana zasekhaya kufuneka zibe nobude obuziisentimitha ezingama-60 (2 ft).
• Gcina isilwanyana sakho sasekhaya sisibotshiwe ngamaxesha onke xa uphuma kwiDOME yakho kwaye kufuneka sikhatshwe ngabanini baso kwiindawo zikawonke-wonke ngamaxesha onke.
• Lonke ugonyo lwezilwanyana zasekhaya ingakumbi oluchasene nomgada kufuneka lube lolu lwangoku kwaye lusebenze. Isiqinisekiso sokugonywa kwesilwanyana sasekhaya kufuneka sinikezelwe.
• Abanini kufuneka babe noxanduva lokuchola ilindle lesilwanyana sasekhaya.
• Sifuna idipozithi yokhuseleko ukuze sivumele izilwanyana zasekhaya, kunye nokuhlawula nawuphi na umonakalo ukuba ukho, ukuba awukho siya kubuyiselwa ekuphumeni.
8. Okokugqibela, shiya amaxhala akho kude ... susa zonke ezo xinzelelo kwaye uzilahle.
• Phumla, jonga ukutshona kwelanga, jonga iinkwenkwezi, kwaye wonwabe!
• Siyayibulela kakhulu ngokubhukisha nathi.
• Konwabele ukuqhwanyaza kwakho kwaye sinethemba lokuba uzakufumana ukuphumla okufunayo.
•YIBA IXESHA ELIMANGALISEKILEYO!
Ibhedi enkulu eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
IBeachTop inokufikelela elwandle ukuze iindwendwe zihambe ziye elwandle kwaye ziqubhe kamnandi (imizuzu embalwa yokuhamba). Kwabo banomdla wokuntywila enzulwini, kukho iBalsa edadayo efumanekayo ngomrhumo. I-boatride ekhawulezayo (5-10 mins) iyafuneka kwaye i-balsa inokuthatha ukuya kuma-20 pax kwiiyure ezi-2 zokuqubha.
Nceda uqaphele ukuba ulwandle ngokwalo lunokuba nejellyfish (dikya) ngamanye amaxesha ngoko ke akucetyiswa ukuba uqubhe ngala maxesha. Inokuba namanzi amdaka ngamanye amaxesha ngakumbi emva kweemvula kodwa indalo inendlela yokuziphilisa kwaye iindwendwe zingonwabela ukuqubha emva kokuphiliswa ngakunye.
Umbuki zindwendwe ngu- Chere Madeleine
Asihlali kufutshane nepropathi ngoko ke nceda ungalindeli ukuba sidibane nawe ngokobuqu kodwa sinabo abakhathaleli abaya kukuncedisa ngexesha lokungena kwakho kwaye bakubonise malunga nepropathi. Nceda ufikelele kuMercy, uEdward okanye uKa Ligaya.
Asihlali kufutshane nepropathi ngoko ke nceda ungalindeli ukuba sidibane nawe ngokobuqu kodwa sinabo abakhathaleli abaya kukuncedisa ngexesha lokungena kwakho kwaye bakubonise malu…